KBZ BANK Photo 2017-08-11 12:30
Source: https://www.facebook.com/KanbawzaBank/photos/a.666756370027052.1073741884.393033680732657/1381686828533999/?type=3 Visit
ဒီတစ်ပတ် KBZ Life အစီအစဉ်ကနေ ကမ္ဘောဇဘဏ် Brand Communications ဌာနမှ ဒီဇိုင်နာ ဦးစောတာမလာဆိုး နှင့် တွေ့ဆုံပြီး မကြာမီကျင်းပတော့မည့် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပွဲတော် (SEA Games) ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေ အားပေးသွားမလဲဆိုတာကို မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဦးစောတာမလာဆိုး ပြောပြခဲ့တာကတော့ " ဒီနှစ် SEA Games မှာ မြန်မာအားကစားသမားတွေ အားလုံးကို တီဗီဖန်သားပြင်ကနေတစ်ဆင့် အားပေးနေမှာပါ။ အထူးသဖြင့်တော့ အမျိုးသားဘောလုံးအသင်းပေါ့။ ဒီနှစ်အသင်းက ကမ္ဘာ့ဖလားသွားကန်ခဲ့တဲ့ အသင်းဖြစ်တာကြောင့်ကော သူတို့ရဲ့ စုဖွဲ့မှုကို သဘောကျတာကြောင့်ရော ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ ရှုံးသည်ဖြစ်စေ နိုင်သည်ဖြစ်စေ မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ မြန်မာအသင်းကို ထာဝရအားပေးနေမှာပါ။"
ဦးစောတာမလာဆိုးကတော့ #ထာဝရအားပေးနေမယ် တဲ့ ... သင်တို့ကော မကြာမီအချိန်မှာ ကျင်းပတော့မယ့် SEA Games ပြိုင်ပွဲကြီးကို ဘယ်လိုမျိုးတွေ အားပေးကြမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားကြပါဦး။
ဒီတဈပတျ KBZ Life အစီအစဉျကနေ ကမ္ဘောဇဘဏျ Brand Communications ဌာနမှ ဒီဇိုငျနာ ဦးစောတာမလာဆိုး နှငျ့ တှဆေုံ့ပွီး မကွာမီကငျြးပတော့မညျ့ အရှတေ့ောငျအာရှအားကစားပှဲတျော (SEA Games) ကိုဘယျလိုမြိုးတှေ အားပေးသှားမလဲဆိုတာကို မေးမွနျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဦးစောတာမလာဆိုး ပွောပွခဲ့တာကတော့ " ဒီနှဈ SEA Games မှာ မွနျမာအားကစားသမားတှေ အားလုံးကို တီဗီဖနျသားပွငျကနတေဈဆငျ့ အားပေးနမှောပါ။ အထူးသဖွငျ့တော့ အမြိုးသားဘောလုံးအသငျးပေါ့။ ဒီနှဈအသငျးက ကမ်ဘာ့ဖလားသှားကနျခဲ့တဲ့ အသငျးဖွဈတာကွောငျ့ကော သူတို့ရဲ့ စုဖှဲ့မှုကို သဘောကတြာကွောငျ့ရော ပိုပွီးစိတျလှုပျရှားမိတယျ။ ရှုံးသညျဖွဈစေ နိုငျသညျဖွဈစေ မွနျမာတဈယောကျအနနေဲ့ မွနျမာအသငျးကို ထာဝရအားပေးနမှောပါ။"
ဦးစောတာမလာဆိုးကတော့ #ထာဝရအားပေးနမေယျ တဲ့ ... သငျတို့ကော မကွာမီအခြိနျမှာ ကငျြးပတော့မယျ့ SEA Games ပွိုငျပှဲကွီးကို ဘယျလိုမြိုးတှေ အားပေးကွမလဲဆို တာကို ပွောပွပေးသှားကွပါဦး။
Active People's Microfinance Institution Plc Photo 2017-08-11 02:39
Active People's Microfinance Institution Plc
Active People's Microfinance Institution Plc Photo 2017-08-10 10:21
លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចីបាន តាមរយៈ LINK ខាងក្រោមនេះ http://apmfi.com.kh/online-request.html
Photos from KBZ BANK's post - KBZ BANK 2017-08-10 09:29
မလှိုင်မြို့နယ်မှ မွေးရာပါ စအိုပေါက်မပါရှိသည့် ကလေးငယ်အား ခွဲစိတ်ကုသပေးရန်အတွက် ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ သွားရောက်လှူဒါန်း
မလှိုင်မြို့နယ်၊ ရာကြီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု သဘွတ်ရုံကျေးရွာမှ အသက် တစ်နှစ်လေးလခန့်သာ ရှိသော က..
KBZ BANK Photo 2017-08-10 04:53
Exchange Rates (10th August 2017, 11:25 AM).
One Life One Bank Ep-5 - KBZ BANK 2017-08-09 11:00
One Life One Bank Ep-5: မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခမ်းနားထည်ဝါမှုတွေကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပြီး အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်ဖို့ သင်က အသင့်တော်ဆုံးသော သူတစ်ဦးပါ။ သင့်ရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုေ..
Photos from Active People's Microfinance Institution Plc's post
ឱកាសការងារជាមួយ អាក់ទីវភីភល !
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV & Cover Letter) មានបិទរូបថតថ្មី និងភ្ជ..
Chennai Super Kings Photo 2018-03-17 08:29
#WhistlePoduArmy - Treat us with your #SuperMeme foraheavy Saturday Feast! #WhistlePodu
[#SkyNews] Please check with your respective airlines as flights to Darwin are canceled due to tropical cyclone. 🌪
NATIONAL PANDA DAY - Warner Bros. Pictures
more days until #DBCAuditions! - Denver Broncos Cheerleaders
Join us in wishing 5-time All-Star Blake Griffin of the Detroit Pistons..
Raymond James - Downtown Winter Haven
NBD - worldwide hotelreservations
Divine Wedding & Photography